फर्नीचर - बेजिया | बेजिया (पृष्ठ २)
बिल्ट-इन बाथटबहरू, तपाईंको बाथरूमको लागि राम्रो समाधान
के तपाइँसँग सानो बाथरूम वा जटिल बिरुवा छ? तपाईले बजारमा फेला पार्नुहुने कुनै पनि बाथटब तपाईलाई विश्वास गर्दैन? ...
ओछ्यानको खुट्टा सजाउनु धेरै सरल कुरा हो किनभने हामीसँग उपलब्ध धेरै विकल्पहरू छन्। सबैभन्दा माग गरिएको पत्ता लगाउनुहोस्!
के तपाईं आफ्नो भान्साको नवीकरण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? के तपाईंले कालोलाई विकल्पको रूपमा सोच्नुभएको छ? कालो किचनहरू प्रचलनमा छन् र व्यक्तित्व ओज। प्रेरित हुनुहोस्!
पूल टेबल - किन तिनीहरूलाई घरमा रमाइलो नगर्ने?
के तपाई पोखरी खेल्न मनपर्छ? पूल टेबल परिवार मनोरञ्जन को लागी एक महान सहयोगी बन्छ। किन एक घरमा राख्नुहुन्न?
एक भव्य पियानो संग तपाइँको घर को सजावट को लागी विचार
के तपाइँ एक भव्य पियानो संग तपाइँको घर को सजावट को लागी विचारहरु को आवश्यकता छ? आज हामी तपाइँ संग केहि साझा गर्छौं, तपाइँ यो राख्न को लागी सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरु देखाउँदै।
कसरी छालाको सोफा सफा गर्ने
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी छालाको सोफा सफा गर्ने हो तब सबै युक्तिहरु र विचारहरु लाई नछुटाउनुहोस् जुन हामी तपाइँलाई देखाउँछौं कि यो पहिले कहिल्यै जस्तै हो।
कसरी एक पुरानो ड्रेसर चरण द्वारा कदम पुनर्स्थापना गर्न को लागी
पुरानो ड्रेसर पुनर्स्थापना गर्न सजिलो छ, सस्तो छ र तपाइँ बिल्कुल निजीकृत र मूल फर्नीचर संग तपाइँको घर सजाउन को लागी अनुमति दिन्छ।
Chaise Longue कभर: तपाइँको सोफा को रक्षा को लागी पूरक
के तपाइँ तपाइँको सोफा को रक्षा गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसोभए तपाइँ Chaise Longue कभर को आवश्यकता छ, तर सही चरणहरु को पालन गर्न को लागी एक तपाइँलाई चाहिन्छ।
कार्यालय को लागी विभिन्न प्रकार को डेस्क
कार्यालय को लागी उपयुक्त डेस्क छनौट मात्र सौंदर्यशास्त्र को एक मामला हो, यो पनि कार्यक्षेत्र को कार्यक्षमता लाई प्रभावित गर्दछ।
प्यालेट्स संग फर्नीचर बनाउन विचार
प्यालेट संग फर्नीचर एक सरल र किफायती तरीका मा हाम्रो घर सुसज्जित गर्न को लागी एक महान विकल्प हो। हामी तपाइँलाई केहि विचारहरु दिन्छौं।
फुटरेस्ट एक अप्रयुक्त टुक्रा हो जुन हाम्रो हितमा योगदान गर्दछ, हाम्रो आराममा। कसले काम गरे पछि ...
के तपाईंलाई थाहा छैन डाइनिंग कोठा कसरी सजाउने? हामी पाँच किसिमका कुर्सीहरू साझा गर्दछौं जुन पहिलो चरणहरू लिन प्रेरणाको रूपमा काम गर्न सक्दछन्।
सानो बेडरूम सजावट: बेडसाइड टेबुलको रूपमा डेस्क
जब बेडरूम सानो छ, डेस्कडपमा बेट्टि table टेबुलको रूपमा बेटिting गर्दा हामीलाई आवश्यक सबै चीजहरू प्रदान गर्न सक्दछौं।
लाह दरवाजे: सबै कुरा तपाईंलाई थाहा हुनु पर्छ
के तपाई ढोका लाखा लगाउन चाहानुहुन्छ? त्यसो भए त्यहाँ डेटाको एक श्रृंखला छ जुन तपाईंलाई जान्नु आवश्यक छ, मूल्यहरू र उनीहरूको चरण-देखि चरणबद्धता ताकि पाइपलाइनमा केहि छोड्नुहुन्न।
बेडसाइड टेबुलहरू फर्नीचरको त्यो समूहको अंश हुन् जुन हामी बेडरूममा आवश्यक ठान्छौं। तिनीहरू महान सहयोगी हो ...
बैठक कोठाको लागि सही सोफा छनौट गर्न हामी तपाईलाई बिभिन्न विचारहरु ल्याउँछौं, यस क्षेत्र मा आवश्यक छ।
एक रमणीय बेडरूमको लागि हस्तनिर्मित हेडबोर्डहरू
चिनाई हेडबोर्डहरू बेडरूममा रुचिको बिन्दु सिर्जना गर्न वा बिभिन्न वातावरणहरू छुट्याउन उत्कृष्ट विकल्प हो। तिनीहरूलाई खोज्नुहोस्!
भोजन कोठा साइडबोर्ड, राम्रा विचारहरू
हामी तपाईंलाई भोजन कोठाको साइडबोर्डमा सुन्दर भण्डारण इकाई पाउन प्रेरणा दिन्छौं।
सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारका पाउफको बारेमा जान्नुहोस् र तिनीहरूलाई कहाँ खरीद गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्
Pf बहुमुखी टुक्रा हुन्छन् सानो साना ठाउँहरु लाई सजाउनका लागि। सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकारका पाउफको बारेमा जान्नुहोस् र तिनीहरूलाई कहाँ खरीद गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईंको बाथरूमको लागि स्टाइलिश वाशबासिन क्याबिनेटहरू
हामी तपाइँलाई फरक विचार र प्रेरणाको साथ बाथरूममा थप्नका लागि स्टाइलिश वाशबासिन फर्नीचरमा केहि विचार दिन्छौं।
Furniture प्रकारका फर्निचर जुन तपाईं ओछ्यानको खुट्टामा राख्न सक्नुहुन्छ
यो सामान्य छ कि बेडरूम सजावट गर्दा हामी मुख्य भित्तामा ध्यान दिन्छौं, तर हामी खुट्टालाई बेवास्ता गर्छौं ...
शौचालय सजावट गर्न निलम्बन फर्नीचरमा शर्त लगाउनुहोस्
तपाईंलाई शौचालय कसरी सज्जा गर्ने थाहा छैन? सस्पेंड फर्निचर एक ठूलो सहयोगी बन्छ जब यो सानो ठाउँहरू सजावटको आउँदछ।
विभिन्न प्रकारका बुककेसहरू, अर्डर गर्नुहोस्!
के तपाईलाई आफ्नो पुस्तक संग्रह क्रम मा राख्नु पर्छ? यसलाई प्राप्त गर्न विभिन्न पुस्तकहरू राखिएका छन्। हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं!
विचारहरू तपाईंको सोफा राख्न र बैठक कोठामा शैलीको टच दिनुहोस्
के तपाईं आफ्नो सोफा राख्न चाहानुहुन्छ ताकि बैठक कोठा उत्कृष्ट शैलीको साथ जीत हो? त्यसोभए हामीले तपाईंलाई यहाँ देखाउने विचारहरू नभुल्नुहोस्।
भित्ता पियानोलाई तपाईंको डेकरमा एकीकृत गर्नका लागि विचारहरू
तपाइँको घरमा भित्ता पियानो एकीकृत गर्न विचारहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? हामी तपाइँलाई कहाँ राख्ने र यसलाई बाहिर खडा गर्ने केही विचारहरू देखाउछौं।
पोयत, घर र घरका लागि क्लासिक बेंच
खडा १ मि. पोयो (‖ ढुङ्गाको बेन्च) पोयो। १ मि. ढुङ्गाको बेन्च वा अन्य सामग्री नजिकको ...
बाथरूम मा एक निलम्बन शौचालय मा शर्त
भित्ता टांगिएको शौचालयले तपाईंलाई तपाईंको बाथरूममा आधुनिक र समकालीन स्पर्श दिन मद्दत गर्दछ। यीका फाइदाहरू र नोक्सानहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
बहु ठाउँहरू साना ठाउँहरू सजाउन फर्नीचर
सानो खाली स्थानहरू प्रस्तुत गर्नु रचनात्मकताको व्यायाम हो। कन्फिगर योग्य तत्वहरू वा बहु-फर्नीचर फर्निचरको साथ मोड्युलर फर्निचरमा शर्त लगाउनु हो ...
Ikea बाट युवा trundle बेड
Ikea युवा trundle बेड तपाईं सफल गर्न सबै आवश्यक छ। अतिरिक्त ठाउँ, दराज, गद्दा र अधिक।
ग्यालिलियो थर्मामिटरहरू प्रयोग गरेर सजाउने विचारहरू
के तपाईंलाई ग्यालली थर्मामिटरहरू थाहा छ? रंगीन र मूल तरिकामा तापक्रमको बारेमा तपाईंलाई बहुमूल्य जानकारी प्रदान गर्नका साथै, ती हुन् ...
तपाईंको हल सजाउन कोट रैक
हल स्ट्यान्ड कोट रैकहरू सँधै हलमा व्यावहारिक हुन्छन्, विशेष गरी जब तिनीहरू केही थप कार्यक्षमता एकीकृत गर्छन्।
तपाईंको घरको लागि types प्रकारको कुर्सीहरू
यदि तपाईं आफ्नो घरको लागि कुर्सीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ तर कुन कुन कुन छनौट गर्ने तपाईंलाई थाहा छैन भने, तपाईंलाई मनपर्ने यी types प्रकारका कुर्सीहरू नभुल्नुहोस्।
कसरी तपाईंको बैठक कोठाको लागि एक सोफा छनौट गर्न
हामी तपाईंलाई घरका लागि उत्तम सोफा छनौट गर्न केही दिशानिर्देशहरू र विचारहरू दिन्छौं, विभिन्न मोडेलहरूको साथ।
तह ढोका: छुट्टै कोठा बचत गर्ने ठाउँ
त्यहाँ धेरै प्रकारका ढोका छन् जुन हामी हाम्रो घरहरूमा स्थापना गर्न सक्दछौं विभिन्न कोठाहरू वा वातावरणहरू सञ्चार गर्न: तह, pivoting, ...
फर्निचरका लागि पाels्ग्राहरू, कुन छनौट गर्ने?
पाels्ग्राहरू भएको फर्निचरले हामीलाई कुनै पनि ठाउँ पुन: वितरित गर्न अनुमति दिँदछ जब र जब तपाईं एक सरल र सहज तरिकामा चाहनुहुन्छ। A…
PEAR बीन ब्याग, आराम गर्न एक अतिरिक्त सीट
नाशपातीको बीनब्याग एक आरामदायक चरित्रको साथ दुवै इनडोर र आउटडोर रिक्त स्थानमा अतिरिक्त सीट समावेश गर्न एक उत्तम विकल्प हो।
हामी तपाईंलाई घरको सजावटको लागि सुन्दर भोजन टेबलमा केही विचारहरू र प्रेरणा दिन्छौं।
ह्यान्गिंग ह्याममा आराम गर्ने क्षणहरूको आनन्द लिनुहोस्
ह्याing्गिंग ह्याम्क्सले सामान्यतया गर्मीको समयमा छत, बगैंचा र पोर्चहरू सजाउँदछ। यद्यपि, यो हुनु आवश्यक छैन ...
बेडरूममा भण्डारण विचारहरू
हामी तपाईंलाई शयनकक्ष क्षेत्रका लागि बिभिन्न रचनात्मक भण्डारण विचारहरू दिन्छौं, विचारहरूको साथ जसले तपाईंलाई ठाउँ बचत गर्दछ।
भित्ते सजावटको लागि मूल अलमाराहरू
हामीले प्रस्तुत गरेको जस्तै मूल तखताहरू भित्ताहरू सजाउने र अन्तरिक्षमा व्यक्तित्व थप्ने उत्तम विकल्प हो।
घाममा आराम गर्नको लागि सूर्य लाउन्जरहरूका प्रकारहरू
अब जब मौसमले हामीलाई टेरेस वा बगैंचामा आरामदायक ढंगमा सुत्न अनुमति दिन्छ, कुनचाहिं डेक कुर्सीले हाम्रो आवश्यकतालाई सुहाउँदो विश्लेषण गर्ने समय आएको छ।
तपाईंको घरको सजावटको लागि प्यालेटहरूको व्यावहारिक तखताहरू
फर्निचर बनाउन काठको प्यालेटको प्रयोग फैलियो र हामी छक्क पर्दैनौं। यी प्यालेट रैक कुनै पनि घरमा व्यावहारिक छन्।
मोड्युलर शेल्फिंग: एक लचिलो भण्डारण प्रणाली
एक मोडुलर शेल्फले तपाईंलाई पुस्तकहरू, बोटहरू, स्मृति चिन्हहरू, खेलौनाहरू वा कामका आपूर्तिहरू सँधै व्यवस्थित गर्न अनुमति दिनेछ तिनीहरूलाई सँधै हातमा राख्न। को लागि ...
एक आधुनिक सेक्रेटरीबाट कार्यक्षेत्र सिर्जना गर्नुहोस्
भाषा रोयल स्पेनिश एकेडेमी को शब्दकोश एक रहस्य लेखिएको बोर्ड संग एक फर्नीचर को रूप मा परिभाषित गर्दछ ...
एम्स कुर्सीहरू, हाम्रो घरहरू सजाउनको लागि क्लासिक
चार्ल्स र रे इम्स द्वारा डिजाइन गरिएका कुर्सीहरू s० को दशकको अमेरिकाको प्रतिमा बने र उनीहरू अझै पक्कै पनि पापुलर छन्, पत्ता लगाउनुहोस्!
वि chair कुर्सी: हाम्रो बैठक कोठामा एक क्लासिक
पखेटा कुर्सी आन्तरिक डिजाइनको क्लासिक टुक्रा हो जुन हामी सबैलाई परिचित छ। मौलिक टुक्रा मा ...
Ways तरीकाहरू Ikea एलेक्सको दराजको छातीको फाइदा लिन
ड्ररहरूको एलेक्स श्रृंखला छाती Ikea को सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरू मध्ये एक हो। एक तत्वको रूपमा डिजाइन गरिएको ...
बालिनिस ओछ्यान: भित्री र बाहिरी ठाउँहरूमा आराम
हामी बालिसिनको ओछ्यानहरू सजावट लक्जरी रिसोर्टहरू देख्ने बानी भएका छौं, सायद यस कारणले यो स्थानको साथ हामी यसलाई सम्बद्ध गर्न अपरिहार्य छ ...
बाथरूम फर्नीचर, सबै स्वादको लागि शैली र विचारहरू
बाथरूम फर्निचरले विभिन्न स्टाइलहरू र विचारहरूको साथ साथै भण्डारणको संयोजन गर्न सक्दछ। के तपाइँ तपाइँको बसाई को लागी सब भन्दा राम्रो खोज्न चाहानुहुन्छ?
Ikea सबै स्वाद को लागी मल
Ikea स्टूलको सहयोगमा, तपाइँका पाहुनाहरूले ठाउँका लागि अब झगडा गर्नुपर्दैन चिया ...
घरका लागि युवा शयनकक्षहरू
युवा शयनकक्षहरू कसरी सज्जा गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्, खाली ठाउँहरू जसलाई कार्यात्मक फर्निचर चाहिन्छ तर सुन्दर सौन्दर्य पनि।
कन्फोरमा सोफा, उत्तम मूल्यमा तपाइँको फर्निचर नवीकरण गर्नुहोस्
के तपाईं चाँडै नयाँ घरमा सर्दै हुनुहुन्छ? के तपाई आफ्नो घरको मर्मत गर्दै हुनुहुन्छ? कन्फोरमामा तपाईले खोज्नु भएको सबै कुरा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ ...
बैठक कोठा सजावट गर्न लामो सोफाहरू लिनुहोस्
बैठक कोठा सजावटको कुरा आउँदा चाइज लाँग सोफेहरू मनपर्नेहरू मध्ये एक हुन्। तपाईं किन जान्न चाहनुहुन्छ? हामी तपाईंलाई यसको फाइदा बताउँछौं
तपाईंको घरमा फ्लर्ट टच दिनका लागि टेबल ड्रेसिंग गर्दै
ड्रेसिंग टेबलले फेरि हाम्रो घरहरूमा ठाउँ फेला पार्दैछ। के तपाई कुन प्रकारको ड्रेसिंग टेबल किन्नु हुन्छ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ र कहाँ? हामी तपाईंलाई भन्छौं
तपाईंको घरको लागि बगैचा फर्नीचर
हामी तपाईंलाई सुन्दर बगैचा फर्नीचरको साथ घर सजावट गर्न बिभिन्न विचारहरू दिन्छौं जुन धेरै कामका र हाल एक प्रवृत्ति हो।
सानो तर व्यावहारिक ड्रेसिंग कोठा सिर्जना गर्नका लागि कुञ्जीहरू
बेजियामा हामी आज तपाईंलाई एउटा सानो तर व्यावहारिक ड्रेसिंग रूम बनाउनको लागि केही कुञ्जीहरू देखाउँदछौं जसमा कपडा र सामानहरू व्यवस्थित गर्न।
तपाईंको घरको लागि छुट्टिन सक्ने पोहरू
हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं तपाईको घर को लागी हटाउन योग्य पूलहरु का लाभ र हानि के हो, बजारमा उपलब्ध मोडलहरु संग।
फर्नीचरको लागि चिपकने कागजको साथ सजावट नविकरण गर्नुहोस्
के तपाईको फर्निचर पुरानो हो? फर्निचरका लागि चिपचाउने कागज एक ठूलो सहयोगी हो जब यो नविकरणको कुरा आउँछ ...
लोहेको हेडबोर्डसहित तपाईंको ओछ्यान सजाउनुहोस्
हामी तपाईंलाई स्टाइलमा ओछ्यानको लागि सुन्दर पोखिएको फलामको हेडबोर्डहरूमा उत्कृष्ट प्रेरणा दिन्छौं जुन पुरानोबाट क्लासिक वा आधुनिकमा जान्छ।
Ikea अनुसार हल सजावटको लागि मूल विचारहरू
हल सजावट हामी सोच्न सजिलो हुन सक्छ विचारहरु को लागी सबै विचारहरु को लागी धन्यवाद जुन Ikea ले हामीलाई प्रदान गर्छ। तपाईले केमा शर्त लगाउनुहुन्छ?
बा children's्क बेडका प्रकारहरू साझा बच्चाहरूको बेडरूमहरू सजाउन
बाunk्ग बेडहरू साझा बच्चाहरूको शयनकक्षमा ठाउँको अभावको व्यावहारिक समाधान हो। तिनीहरू यस्तो डिजाइन गरिएको थियो कि ...
एन्टिक फर्नीचरको साथ घर सजाउनुहोस्
हामी तपाईंलाई विभिन्न विचारहरू तपाईंको घरलाई उत्कृष्ट एन्टिक फर्निचरसँग सजाउन दिन्छौं जुन तपाईंको कुनाहरूको लागि ठूलो आकर्षण र व्यक्तित्व प्रदान गर्दछ।
प्यालेटहरू संग सजावट
प्यालेटहरू काठका टुक्रा हुन् जुन बहुमुखी हुन्छ जब सजावटका ठाउँहरू आउँदछन्, किनकि तिनीहरूले हामीलाई उत्तम संभावनाहरू प्रदान गर्छन्।
बैठक कोठामा टिभी फर्नीचर
हाम्रो घरहरू बर्षको बर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ, तर हामी अझै पनि तपाईंलाई देखाइरहेको जस्तो बैठक कोठामा टिभी फर्नीचर चाहिन्छ।
सिनफोनियर, फर्नीचरको एक बहुमुखी र स्टाइलिश टुक्रा
शिफोनियर, फ्रेन्च आवाज शिफोनियरको ग्राफिक रूपान्तरण, 'ड्रयरको साथ अग्लो र साँघुरो ड्रेसर' हो। सहायक फर्नीचर ...
Smeg फ्रिज, तपाइँको भान्सा मा एक पुरानो स्पर्श
Smeg 50s रेफ्रिजरेटर एक शैली आइकन भएको छ। गोलाकार आकारहरू र रंगहरूको विस्तृत श्रृंखलामा, यसले सबै शैलीहरूको रसोईघर सजाउँदछ।
एन्टिक ड्रेसरहरू तपाईंको घर सजाउनका लागि
हामी तपाईंलाई बहुमुखी र मूल एन्टिक ड्रेसरहरू, उत्तम भण्डारण फर्नीचरको साथ घरको कुनाहरू सजाउन विचार दिन्छौं।
नेस्टिंग टेबल, सीमित स्थानहरूमा एक बहुमुखी विकल्प
नेस्टि table टेबुलहरू अतिरिक्त टेबुलिटीसहित टेबुलहरू हुन्। तिनीहरूले हामीलाई तालिकाको उपयोग गरेर बिभिन्न रचनाहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ ...
Ikea शेल्फहरू: सबै ठाउँमा यसको स्थान
पुस्तकदेखि परिवारको फोटोसम्म, त्यहाँ खजानाको एक संसार छ जुन तपाईं Ikea को अलमारहरूमा ठाउँ पाउन सक्नुहुन्छ। लोकप्रिय जनतालाई भेट्नुहोस्।
काठको फल बक्सको साथ सजावट, धेरै सस्तो विचारहरू!
काठको फल बक्सको साथ सजावट हामीसँग सस्तो र सबै भन्दा बहुमूल्य विचारहरू मध्ये एक हो। सबै कोठा र शैली फिट गर्दछ!
जापानी फ्यूटन, तपाईंको आरामको लागि एक विकल्प
के तपाईं गद्दा बदल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ र परम्परागत मोडेलबाट उम्कन चाहानुहुन्छ? जापानी futons एक महान विकल्प हो।
बिछ्याउने पलंगहरू, सबै चीजहरू तपाईंलाई खरीद गर्नु अघि थाहा हुनुपर्दछ
फोल्डिंग बेडहरू एक उत्तम विकल्प हुन्छन् जब हामीसँग घरमा धेरै सीमित स्थान हुन्छ। खरीद गर्नु अघि तपाईंलाई आवश्यक सबै चीजहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
काठको हेडबोर्ड, शयनकक्षमा प्राकृतिकता
ओछ्यानको फ्रेमिंग गर्नुका साथै काठको हेडबोर्डले बेडरूममा न्यानोपन थप्दछ। त्यहाँ धेरै प्रकारका छन्। हामीले तपाईको लागि केहि भेट्टायौं।
दराजहरूको छाती: कुनै पनि कोठामा व्यावहारिक
घरका कुनै पनि कोठामा दराजहरू धेरै व्यावहारिक हुन्छन्। तपाईं तिनीहरूलाई बिभिन्न शैलीहरूको साथ फेला पार्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई अनुकूलित पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
Pallet sofas तिनीहरूलाई आफैं बनाउनुहोस्!
प्यालेट सोफेहरू घर र घर दुवै पट्टि ठाउँहरू सजाउने एक सरल र सस्तो तरीका हो। हामी तपाईंलाई केहि विचारहरू देखाउछौं।
कपडा वार्डरोब, एक सरल र सस्तो विकल्प
फेब्रिक कपाटहरू कपडा वा अन्य चीजहरू भण्डारण गर्नको लागि सरल र सस्तो समाधान हो जुन तपाईं धूलो र चिस्यानबाट जोगाउन चाहनुहुन्छ।
उच्च मल, कसरी र कहाँ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने?
उच्च मल भान्साकोठा, कार्य क्षेत्र र बाहिरका ठाउँहरूमा धेरै उपयोगी हुन्छ। तर के तपाईंलाई थाहा छ कुन उद्देश्यहरू प्रत्येक उद्देश्यका लागि बढी उपयुक्त छ?
कोठामा ठाउँ बचत गर्न पलs बेच्दै
फोल्डिंग बेडहरू ठाउँ बचाउनको लागि उत्तम विकल्प हो जब कोठाहरू सानो हुन्छन् वा जब ती प्रायः प्रयोग हुँदैनन्।
फायरप्लेस, न्यानो र आरामदायी संग लाउन्जहरू
बेजियामा हामीले फायरप्लेससहित बस्ने कोठाहरूको छविहरू स collected्कलन गरेका छौं जुन यस "रोमान्टिक" तत्त्वका लागि पर्खाल कभरिंग छनौट गर्दा तपाईंलाई प्रेरणा दिन सक्छ।
बेडरूम सजावट गर्न बच्चाहरूको ओछ्यानका प्रकारहरू
बच्चाहरूको ओछ्यानका धेरै प्रकारका हुन्छन् जुन बच्चाहरूको बेडरूम सजावटको लागि छनौट गर्न सधैं सजिलो हुँदैन। हामी तपाईंलाई सबै सम्भावनाहरू देखाउछौं।
साइडबोर्ड, बैठक कोठामा एक मुख्य फर्नीचर
साइडबोर्डहरू बैठक कोठामा एक मुख्य फर्नीचर हो। तिनीहरू भइसकेका छन् र फेरि ढोकाबाट छन्। किनभने भण्डारण प्रकार्यहरू हुनुको साथै, तीनिहरू हामीलाई कोठामा पनि अनुकूलित रूपमा एकदम शोभनीय सजावटका टुक्राहरू देखाउन अनुमति दिन्छ।
साना शौचालयहरू सजाउन फर्नीचर
साना शौचालयहरू सजावट चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। तर त्यहाँ फर्नीचर छ जुन हामीलाई सफा र सुथरा स्थान सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। हामी तपाईंलाई देखाउँदछौं।
Sillatea: कुर्सी र सजावट मा विशेषज्ञहरु
Sillatea कुर्सी र अन्य सजावट उत्पादनहरु मा विशेषज्ञता प्राप्त एक अनलाइन स्टोर हो जससँग तपाइँ तपाइँको घर, तपाइँको कार्यालय वा तपाइँको व्यवसाय लाई पोशाक गर्न सक्नुहुन्छ।
फोल्डिंग डेस्क, साना ठाउँहरू सजाउने समाधान
फोल्डि des डेस्कले हामीलाई ठाउँ बचत गर्न मद्दत गर्दछ जब हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छैन। सानो र साझा स्थानहरूको लागि एक शानदार समाधान।
स्लाइडिंग ढोका सहित वार्डरोब्स
किनभने स्लाइडि doors ढोकाको वार्डरोबसँग धेरै सुविधाहरू छन् ध्यानमा राख्न। हुनसक्छ, केही असुविधा पनि छ तर अझै पनि तिनीहरू हाम्रो बेडरूमको लागि आधारभूत फर्नीचरहरू हुन्। तपाइँको कुञ्जी कोठामध्ये एकमा शैली थप्नको लागि उत्तम तरिका।
नर्सरी कसरी सजाउने
बच्चा कोठा सजावट महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसैले हामी तपाईंलाई विभिन्न शैलीहरू मार्फत थोरै प्रेरणा दिन्छौं।
Ikea स्क्रीन तपाईंको सबैभन्दा विशेष वातावरण छुट्याउन
Ikea स्क्रिनले हामीलाई अधिक मूल सजावटका साथै उनीहरूको राम्रो प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। वातावरणलाई अलग गर्न, तिनीहरूले हामीले विचार गरिरहेका चीजहरू जस्ता उत्पादनहरूको बारेमा सोच्दछन्। तपाईंको कोठा, बैठक कोठा वा अन्य कोठाहरू विभाजन गर्नुहोस्। तपाइँ कहाँ सुरु गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
Ikea को साथ तपाईंको घर प्रस्तुत गर्न कम लागत विचारहरू
आज, सजावटको बारेमा हाम्रो लेखमा, हामी तपाईंलाई Ikea को साथ तपाईंको घर प्रस्तुत गर्न केही कम लागत विचारहरू सहित छोड्छौं। तिम्रो के बिचार छ?
बगैचा मा एक विश्राम क्षेत्र कसरी बनाउने
आजको सजावट लेखमा हामी तपाईंलाई घरको बगैचामा आराम गर्ने क्षेत्र कसरी बनाउने भनेर बताउँछौं। तपाई छिमेकको ईर्ष्या हुनुहुनेछ!
उच्च-अन्तमा सोफाहरू, तपाईंको लि .्ग कोठामा चाहिने राम्रो स्वाद
सब भन्दा राम्रो उदाहरण र सबै भन्दा राम्रो कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस् तपाईको बैठक कोठामा उच्च-अन्तको सोफाहरू राख्ने। तपाईं पक्कै पनि विभिन्न आँखा संग सजावट देख्नुहुनेछ!
भान्सा मा अधिक दराज छ को कारण
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँको भान्छामा केही दराजहरू छन् भने, तपाइँसँग किन धेरै ड्रयरहरू हुनुपर्दछ र किन त्यसले तपाइँको जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
किन उच्च-अन्तमा छालाको सोफा छान्नुहोस्
उच्च-अन्तमा छालाका सोफाहरू फेब्रिक सोफेहरू भन्दा गुणस्तरमा धेरै हुन्छन्, तर तिनीहरू मर्मत गर्न र सफा गर्न पनि सजिलो हुन्छ।
बच्चाहरूको ओछ्यान, बच्चाहरूको लागि रचनात्मकताको संसार
बच्चाहरूको ओछ्यान हाम्रा साना बच्चाहरूको लागि सिर्जनात्मकताको संसार बन्न सक्छ। गजबपछि, हामीले तिनीहरूलाई ...
काठको प्यालेटको साथ सजावट
काठको प्यालेटले सजावट हामी कस्टम बेडबाट सोफासम्म पुग्छौं, हाम्रा बिरूवाहरू रोप्नको लागि एक ठाउँ हुँदै जानुहुन्छ।
न्यूनतम पलंगहरूको भव्यता
ओछ्यान बेडरुममा आवश्यक छ, तपाईं कम से कम बेडको के सोच्नुहुन्छ?
विचारहरू एक मूल र रिसाइक्ल हेडबोर्ड छ
यदि तपाईं आफ्नो हेडबोर्ड परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ वा तपाईं कुनै पनि छैन र तपाईं यो मूल र रिसाइकल चाहनुहुन्छ भने, यी विचारहरू नभुल्नुहोस्!
सही सोफा प्राप्त गर्नका लागि विचारहरू
एक सोफा खरीद आवेगमा गरिनु हुँदैन, त्यहाँ ध्यान दिन धेरै कारकहरू छन्, विशेष गरी यदि हामी यसलाई केहि बर्ष राम्रो स्थितिमा चाहान्छौं भने
प्रबलित डिजाइन: सपना पलंगहरू
बैठक कोठामा ओछ्यान, खुला क्यानपिजहरू, फ्लोटिंग फ्रेम, साइड टेबल्स जो ओछ्यानको आधारमा एकीकृत छन् ... राम्रोसँग निदाउनु कहिल्यै यत्तिको सजिलो भएको छैन र एकै समयमा यति जटिल भएको छैन।
ठाउँको अभावका लागि बहुमुखी डिजाइन
जब हामी हाम्रो घर सजाउने उत्तम तरिकाको बारेमा सोच्दछौं, कुञ्जीहरू मध्ये एउटा स्थान कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्नेमा निहित छ। यो फर्निचर राम्रो उदाहरण हो।
बिक्रो! बोतल क्याप देखि इम्फर्वेसन्ट डिजाइन
हामीसँग पिउन केही छैन। २०१ork को अवधिमा कर्क एक औद्योगिक स्तरमा स्टार सामग्रीहरू मध्ये एक हुनेछ यसको लचिलोपन, कम लागत र असंख्य विकल्पहरूको कारण
ठाँउबाट बाहिर जान्छ
केहि प्रयोगहरू जुन विगतमा प्रयोग गरिएको सि recoveredहरू पुन: प्राप्ति भइरहेको छ र केवल सौंदर्यशास्त्र वा पुनरुद्धारको लागि मात्र होईन तर तिनीहरूको दैनिक कार्यक्षमतामा अपील गरेर।
शोकेसहरू जुन तिनीहरूको ठाउँ पुन: प्राप्ति गर्दछ
समकालीन प्रदर्शन क्याबिनेटहरू फेरि घर सजावटको लागि आधारभूत टुक्रा मानिन्छ, यद्यपि तिनीहरूको उपस्थिति र उनीहरूले समावेश गरेको सामग्री परिवर्तन भएको छ।
देश फर्निचर: नविकरण र प्रत्यक्ष
देश शैलीको फर्नीचर १ the औं, १ th औं र २० औं शताब्दीको ठेठ सजावटी बान्कीबाट लिइएको हो तर चाखलाग्दो रिसाइकल गरिएको छ।
नुहाउने वा स्नान गर्ने? राम्रो कम्बो राम्रो छ
हाम्रो शौचालय को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प को बारे मा शाश्वत शंका बितिसकेको छ: एक ही ठाउँमा बाथटब-स्नान संयोजन, र कुनै छलफल छैन।
सिलाइएको फर्निचर: डिजाईन जसले थ्रेडलाई तान्छ
यदि सिलाई सबैभन्दा लोकप्रिय शौक मध्ये एक बन्छ भने, यो तार्किक छ कि औद्योगिक डिजाइन पनि एक साधारण धागा को सम्भावनाहरु को नोट ले।